मोबाइल पुरानो भएको छ अनि साट्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने दरबारमार्गमा रहेको एप्पल वल्र्ड मोबाइल तपाईँको गन्तव्य बनेको छ । मर्कन्टाइल प्लाजाको पहिलो तल्लामा रहेको एप्पल वल्र्ड मोबाइलले पुरानो मोबाइल साटेर नयाँ लैजान चाहनेहरुका लागि एक्स्चेञ्ज अफर सुरु गरेको छ । …
बैंकिङ खबर । डिसहोममा नेपाली कथानक चलचित्र जालो रिलिज भएको छ । डिसहोमको च्यानल नं। १०८मा घरमै बसेर परिवारको साथमा नयाँ फिल्महरु रिलिज भएकै मितिमा हेर्न सकिने छ । यस योजना अन्तर्गत डिसहोमका ग्राहकले प्रतिशो २२५ रुपैयाँ शूल्क बुझाउनुपर्ने हुन्छ । …
नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्चले पल्सर स्पोर्टस् अवार्डका लागि डिस होम मिडिया नेटवर्क लिमिटेडसँग सम्झौता नवीकरण गरेको छ । मञ्चले बिहिबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै डिस होमसँग ७ लाखमा सम्झौता नवीकरण गरेको हो । सम्झौतासँगै डिस होमले अवार्डको लागि ४ …
बैंकिङ खबर । प्राथमिक सेयर निष्काशनमा सिआस्वा प्रणाली अनिवार्य भएको छ । यसको मतलब अब आईपिओ, एफपिओ र हकप्रद सेयर खरिदका लागि आवेदन दिँदा सिआस्वा प्रणालीको प्रयोग गर्नुपर्नेछ । अहिले आस्वा सेवा प्रदान गर्दै आइरहेका सम्पुर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई …
डिसहोममा रिलिज भयो ‘मेरो कथा’, जान्नुहोस् सिनेमा खुलाउने तरिका
बैंकिङ खबर । हरेक साता नयाँ नयाँ नेपाली फिल्महरु हलमा लागेकै दिन रिलिज हुँदै आएको डिसहोममा नेपाली कथानक चलचित्र मेरो कथा रिलिज भएको छ । डिसहोमको च्यानल नं. १०८मा घरमै बसेर परिवारको साथमा नयाँ फिल्महरु रिलिज भएकै मितिमा हेर्न सकिने …
प्रभु समुहले ल्यायो नयाँ प्रविधिमा एचडी क्वालीटीको ‘प्रभु टिभि’
बैंकिङ खबर । प्रभु समूहले केबल, एन्टेना तथा छाता बिना नै डिजिटल टेरेस्ट्रियल टेलिभिजन (डीटीटी) प्रविधिमा आधारित प्रभु टिभी संचालनमा ल्याएको छ । डाइरेक्क टु होम (डीटीएच) प्रविधिको डिस होम सञ्चालन गरिरहेको प्रभु समूहले नेपालमै पहिलोपटक डीटीटी भित्र्याएको हो । …
एक सय दिनभित्र सबै टिभी प्रशारण डिजिटल हुँदै
बैंकिङ खबर । अबको एक सय दिनभित्र एनालग केबल टिभी प्रशारण बन्द हुने भएको छ । सञ्चार तथा सुचना प्रविधी राज्यमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाद्धारा सार्वजनिक मन्त्रालयको १ सय दिनभित्र गर्ने कार्यसुचिमा एनलग प्रविधीलाई असाढ मसान्तभित्रै देशभर डिजिटल प्रसारणको व्यवस्था गर्ने उल्लेख …
बैंकिङ प्रविधिमा सबैभन्दा बढी डेबिट कार्डको प्रयोग
बैंकिङ खबर । बैंकिङ क्षेत्रमा दर्जनौँ प्रविधिहरु भित्रिसक्दा पनि प्रयोग भने ज्यादै न्युन हुने गरेको छ । बैंकिङ पहुँच र वित्तीय साक्षरताको अवस्था नै कमजोर रहेको अवस्थामा बैंकिङ प्रविधिको प्रयोग गर्नेको संख्या अति नै कम रहेको छ । सर्वसाधारणमा प्रविधिसम्बन्धी …
डिसहोममा ‘गाजा बाजा’, यसरी खुलाउनुहोस् सिनेमा
बैंकिङ खबर । हरेक साता नयाँ नयाँ नेपाली फिल्महरु हलमा लागेकै दिन रिलिज हुँदै आएको डिसहोममा गाजा बाजा फिल्म रिलिज भएको छ । डिसहोमको च्यानल नं. १०८मा घरमै बसेर परिवारको साथमा नयाँ फिल्महरु रिलिज भएकै मितिमा हेर्न सकिने छ । …
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको सम्पूर्ण सूचना अब एकै क्लीकमा !
ट्रिउम्फ मिडियाले नेपालमा पहिलो पटक वित्तीय सूचना प्रदायक वेव साइट फाइनेन्सियल नोटिसेस् डट कम (www.financialnotices.com) सञ्चालनमा ल्याएको छ । सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको सम्पूर्ण सूचना, एउटै अनलाईनबाट जानकारी दिने उद्देश्यले फाइनेन्सियल नोटिसेस् डट कम सञ्चालनमा ल्याईएको हो । नेपाल …
नेपालको एक अग्रणी केबल टेलिभिजन, इन्टरनेट र नेटवर्क सेवाप्रदायक कम्पनी सुबिसु केबलनेट ९प्रा।० लि।ले आफ्नो क्लियर टिभी सेवामा २५०भन्दा बढी डिजिटल च्यानलहरु विस्तार गरेको छ । यसमा ६०भन्दा बढी एचडी च्यानलहरु रहेका छन् । सुबिसु हाल नेपालकै सबैभन्दा बढि एचडी …
धमाधम डिजिटल बन्दै टेलिभिजनहरु, काठमाडौँ र ललितपूरमा पूर्ण रुपमा लागू
बैंकिङ खबर । एनालग केबल टेलिभिजनहरु धमाधम डिजिटल प्रविधिमा रूपान्तरण हुन थालेका छन् । सूचना तथा संचार प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म काठमाडौँ महानगरपालिका र ललितपूर महानगरपालिकामा पूर्ण रुपमा डिजिटल प्रविधि लागू भइसकेको छ । भरतपूर, विराटनगर, पोखरा र वीरगञ्जमा भने …
बैंकिङ खबर । नेपाल राष्ट्र बैंकले विद्युतीय बैंकिङ कारोबारको सीमा तोकेको छ । जसअनुसार, इन्टरनेट बैंकिङबाट दैनिक अधिकत्तम एक लाख र मासिक पाँच लाख रुपैयाँसम्म मात्र कारोबार गर्न पाइने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार विद्युतीय माध्यमबाट गरिने कारोबारको …
बैंकिङ खबर । अहिले नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा नयाँ–नयाँ प्रविधि भित्रिने क्रम जारी छ । मोवाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ, व्रान्चलेस बैंकिङ, अनलाइन बैंक खाता, अनलाइन आस्वा सेवा, भाइबर बैंकिङ लगायत विभिन्न प्रविधिहरु नेपालका बैंकहरुले भित्र्याइरहेका छन् । यद्यपि, बैंकिङ प्रविधिहरुको प्रयोग …